အချိန်မရွေး – Grab Love Story
ဦးစိုင်းမောင် မိန်းမ ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ ဒါရိုင်ဘာ မောင်တူး အိမ်ပြန် ခေါ်လာရာ ဧည့်ခန်းထဲ အမူး လွန်လာ တဝေါ့ဝေါ့ ထိုးအမ် နေ၏။ မောင်တူးမှာ သံပရာရည် ဖျော်ကာ ဒေါ်နန်းသဇင် ထိုင်နေသော ခုံရှေ့ တည့်တည့် စားပွဲခုံ ပေါ်ချထားပေး လိုက်သည်။ ” မောင်တူး ” ” ဗျာ …… မမနန်း ” ” မင်း … ဆရာရော……. အေ့ …… ဝေါ့ … အွိ ….. အိ့ …. ဝေါ့ ဝေါ့ ” ” ဆရာက … သူ့မိတ်ဆွေ … အိမ်မှာလေ …… မမနန်းကို …… ကျနော် လာခေါ်ခိုင်းလို့ ………… ဒီအိမ်ပြန်ခေါ် လာတာပါ ” ” အော် … မင်းဆရာ …သူတော်ကောင်းကြီးက … ကျမ်းမာရေး မကောင်းတော့တဲ့ … သူငယ်ချင်းရဲ့ … မိန်းမကိုကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ …… ပြုစု နေပြီထင်တယ် . ထွီ ဖီ ” ” ကဲပါ … မမနန်းရယ် ……… တကိုယ်လုံး လည်း …… ပွနေပြီ …… ရေချိုးပြီး ……အိပ်လိုက်တော့ နော် ” ” အေး …. ငါ မူးနေတာ …… မောင်တူး …… ရေချိုးခန်း ….. တွဲပို့စမ်း ” ” ဟုတ် ……… မမနန်း ” ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ အပွင့်ရိုက် ပါတိတ် အစိမ်းရောင် ဝမ်းဆက်ပေါ်တွင် အမ်ဖတ်များနှင့် ပွစိတက် ကာ ချဉ်းစူးစူး အနံ့များ ထွက်ပေါ် နေသဖြင့် ရေချိုးရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်တော့၏။ ခပ်တည်တည် နေတတ် ပေမယ့် ရာဂစိတ် ပြင်းထန်ချိန် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေတတ် သည်။ ခုလည်း ယောင်္ကျားဖြစ်သူ နှင့် အတူသောက်ကာ အပြန် စိတ်ရှိ လက်ရှိ လိုးရန် စဉ်းစား ထားချိန် သူမအား ပထုတ်လိုက်သဖြင့် စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်ကာ ဒါရိုင်ဘာ မောင်တူးအား ရစ်နေတော့၏။
” မောင်တူး ” ” ဗျာ … မမနန်း ” ” မင်း … ဆရာရော ” ” အမ် …… သူ့မိတ်ဆွေ …… ဦးရဲကျော် ……… အိမ်မှာလေ ” မောင်တူး စိတ်ညစ်နေရသည်။ ဆရာ ကတော်အား အမြန်ဆုံး အိပ်ပျော်သွားရန် ကြံနေမိ၏။ ” အေးအေး ……… ငါ့ ………… ရေချိုးခန်း ……… လိုက်ပို့ ” ” ဟုတ် ” ဒီတကြိမ် ဒေါ်နန်းသဇင် စကားဆုံးသည်နှင့် မောင်တူး မှာ ခုံပေါ်ထိုင်နေသော ဒေါ်နန်းသဇင်အား ချိုင်းမှ ဆွဲထူ လိုက်တော့၏။ နှာခေါင်းထဲ စူးကနဲ့ ချဉ်တူးတူး အမ်ဖတ် အနံ့များ ဝင်လာသဖြင့် အသက်အောင့် ထားရပြန်သည်။ ထိုချိန် ဒေါ်နန်းသဇင် လက်၂ဖက်မှာ မြောက်တက် လာပြီး မောင်တူး ပုခုံး ၂ဖက်အား ဖက်ကာ တွဲလဲ ခိုနေ၏။ ယိမ်းယိုင်နေသော ဒေါ်နန်းသဇင် ကိုယ်လုံးအား ဟန်ချက် ညီအောင် ထိန်းရင်း မောင်တူးတယောက် ဧည့်ခန်းနှင့် အနောက် ဖက် မျက်စောင်းထိုးရှိ ရေချိုးခန်းနား ခေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ် မမျော်လင့်သော အထိအတွေ့ ကြောင့် မောင်တူး စိတ်လှုပ်ရှားမှု့ ပြင်းထန် နေတော့၏။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ကပ်ကာ လျှောက်လာ ရ သဖြင့် ဒေါ်နန်းသဇင် ဆီးခုံးနေရာလေးအား အောက်ဆိုက် ကျနေသော လီးဖြင့် ပွတ်မိရာ တဖြည်း ဖြည်း လီးက ခုံးထ လာပြီး ထောင်ထွက်နေရှာသည်။ သေချာ မရည်ရွယ် ပေမယ့် ထောင်မတ်လာသော လီးထိပ်မှာ ဒေါ်နန်းသဇင် ပေါင်ဂွထဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေမိ၏။ သာမာန် ချိန်တွင် ခြေလှန်း ၅ဝခန့် လျှောက်လျင် ရောက်နေသော ရေချိုးခန်းအား ဒေါ်နန်းသဇင် ကိုယ်လုံး ယိမ်းသည့်ဘက် ထိန်း လျှောက်နေရ သဖြင့် အတော်နှင့် မရောက်နိုင်သေး ပေ။ ထူးခြားသည်က ခြေလှမ်းယိုင်သွားသော ဒေါ်နန်းသ ဇင် ကိုယ်လုံးအား ခါးမှ ပြန်ဆွဲကပ်စဉ် ပေါင်ဂွလေးထဲ လီးထိပ်နှင့် ထိုးမိတိုင်း ပုခုံးပေါ် ခေါင်းတင်ထားသော ဒေါ်နန်းသဇင် နူတ်ခမ်းမှ အင့်ကနဲ့ မပွင့်တပွင့် နှာမှုတ် သံလေး ကြားနေရ သည်။ ပါတိတ် ထမိန်လေးမှာ အမ်ဖတ်များဖြင့် ရွှဲနေကာ ပေါင်ကြားမှ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးပါ စိုနေ၏။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီမှာလည်း အပါးလေးမို့ အကာ အကွယ်မဲ့ နေသလို ဖြစ်ကာ မောင်တူး လီးထိပ်ဖြင့် ထိုးမိတိုင်း ခါးလေး တွန့်နေပြန်သည်။ ရေချိုးခန်းထဲ အရောက် မောင်တူး အခက် တွေ့နေရ၏။ ဒေါ်နန်းသဇင် မှာ ပါတိတ်အင်္ကျီကြယ်သီးများ ဖြုတ်ကာ အင်္ကျီချွတ်ရင်း တဆက်တည်း လက်၂ဖက် နောက်ပစ် ကာ ဘော်လီချိတ် အား ဖြုတ်ချပစ်သည်။
ဘော်လီးကိုင်းအား ပုခုံးတဖက်ဆီ မှ အောက်လျှော ချရာ အနည်းငယ် အိတွဲနေသော နို့အုံ ၂ဖက် ထွက်ကျ လာ၏။ ထို့နောက် ရေချိုးခန်း နံရံအား ကျောမှီရင်း ထမိန်အား ခြေရင်း ဖြည်ချရင်း အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အား ခြေတဖက်ချင်း ကြွကာ ချွတ်လိုက်ပြန် သည်။ ” မောင်တူး ” ” ဗျာ … မမနန်း ” ” ငါ့ ကိုယ်လုံး … သေချာကြည့်စမ်း … လှသေးရဲ့လား ” ဒေါ်နန်းသဇင်တယောက် ကိုယ်တပတ်လှည့်ကာ ပြနေ သဖြင့် မောင်တူးလည်း ငေးကြည့်နေမိသည်။ ” ဟုတ် … ဟုတ် ……… လှ ပါ တယ် …… မမ …… မမ နန်း ” မောင်တူး အသံများ တုန်ရီစွာ ဆရာကတော်အား ကြည့် ရင်း ပြန်ဖြေလိုက်၏။ ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ မောင်တူး ပြန် ကြည့်ရင်း လက်မလေး ထောင်ပြ သဖြင့် မောင်တူး လည်း လက်မ ပြန်ထောင် ပြလိုက် ရသည်။ ” ဒါနဲ့များ .မင်းဆရာကဘာလို့ ……… စိတ်မပါတော့ တာလဲ ” ” ဟို ဟို ……… အဲဒါတော့ ………… ကျနော် ……… မသိဘူး ” ” အင်း … ရေဖွင့်ကွာ ……… ရေချိုးပေး “ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ အရင် လင်မယား ၂ယောက် အတူ ရေချိုးတိုင်း လင်ဖြစ်သူအား ရေပန်းဖြင့် တကိုယ်လုံး ပန်းခိုင်းကာ ချိုးလေ့ရှိသည်။ ခုလည်း မောင်တူးအား မူးမူးဖြင့် လင်တော်မောင် ဦးစိုင်းမောင် နေရာအား အစားထိုးကာ ရေချိုးနေတော့၏။ ” မောင်တူး ” ” ဗျာ ” ” မင်းက …… ဘာကြောက်နေတာလဲ …… နောက်ကနေ ပဲ … မပန်းနဲ့ … ဒီရှေ့လာပန်းပေး ” ဒေါ်နန်းသဇင် စကားကြောင့် မောင်တူး စိတ်ထဲ ဖျိုးဖျိုး ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်သွားရ၏။ ပေါင်ကြားထဲက လီးကလည်း ထောင်မတ်နေကာ ပုဆိုး ရေစို သွားသဖြင့် လီးအား ရေစိုဝတ် ပတ်ထားသလို ဖြစ်နေရှာသည်။ မျက်နှာပူပူ ဖြင့် ဒေါ်နန်းသဇင်ရှေ့ မတ်တပ်ရပ်ကာ လည်ပင်းမှ စ၍ နို့အုံ ၂ဖက်အား ရေပန်းဂေါက်လေးဖြင့် ပန်းပေးကာ တဖြည်း ဖြည်း ဆီးခုံးနား အရောက် အစိလေးအား ပေါ်အောင် လက်၂ဖက်နှင့် ဖြဲပေးထားရာ အဖုတ်လေးအား ကြာကြာ လေး ပန်းပေးလိုက်၏။ ” ဟင် …… မောင်တူး ” ” ဗျာ ” မောင်တူး မျက်စိ မျက်နာ ပျက်နေတော့သည်။
အခန့် မသင်လျင် အလုပ်ပြုတ်ဦးမည်။ ” အင်း … ငါ့ ကိုယ်လုံးက … ဆွဲဆောင်မှု့ ရှိပါသေးတယ် … ပြစမ်း ” ” ဟမ် ” ” မင်းဟာကြီးက …… အဖုလုံး လေးတွေ ……… အနာ တွေလား ” ” မဟုတ်ပါဘူး …… အဲတာ ဂေါ်လီ တွေပါ …… မမနန်း ” ဒေါ်နန်းသဇင် တယောက် မူးမူးနှင် လင်တော်မောင် အား အရွဲ့တိုက်ရင်း လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတော့ သည်။ မောင်းတူး ပုဆိုးအောက်နားစအား လှန်ကာ လီးအား အုပ်ကိုင် လိုက်တော့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှား နေသော မောင်တူး တယောက် ရုတ်တရက် ဒေါ်နန်းသဇင် အပြုမှု ကြောင့် လရည်ထွက်မတက် လီးတန် တလျှောက် ကျဉ်ကနဲ့ ခံစား လိုက်ရ၏။ ” တော်ပြီကွာ … ရေချိုးပြီး … အိပ်ခန်းထဲ သွားမယ် … မင်းလည်း … တခါထဲ ချိုး … မောင်တူး ” မောင်းတူ ခုမှ သက်ပြင်း ချနိုင်တော့သည်။ အလုပ် မပြုတ် ပဲ အဆင်ပြေလျင် ကာမ စည်းစိမ်းလေး ခံစားရမည်မှန်း ကြိုတင် သိရှိနေတော့သည်။ ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ မောင်တူး အား မကြည့်တော့ပဲ တကိုယ်လုံး ဆပ်ပြာတိုက်ကာ ရေချိုးပြီး အရင် ထွက်သွား၏။ ဒေါ်နန်းသဇင် ထွက်သွား အပြီး မောင်တူးမှာလည်း ရေအမြန် ချိုးကာ ထွက်လာ ခဲ့လိုက် သည်။ ရေချိုးခန်းမှ ထွက်ပြီး အိမ်၏ တောင် ဘက် ကားဂိုဒေါင်ဘေး သူနေသော တိုက်ခန်းလေးထဲ ရေဝတ် လဲရန် ဧည့်ခန်းထဲ အဖြတ် နောက်ကျော ဘက်မှ ခေါ်သံ ကြားလိုက် ရတော့၏။ ” မောင်တူး ” ” ဗျာ … မမနန်း ” ” မင်း အခန်း မသွားနဲ့တော့ …… ဒီလာ …… ရော … ဒါကို အရင် လဲထား ” မောင်တူး လှည့်ကြည်ချိန် ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ တဘက် အကြီး တထည်အား ရင်လျားရင်း ပုဆိုး အဟောင်း ပစ် ပေးနေသည်။ မောင်တူး တယောက် ရေစို ပုဆိုးအား လဲဝတ်ရင်း ဒေါ်နန်းသဇင် နောက်မှ ကပ်ပါ လာခဲ့၏။ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ တဘက် ရင်လျား ရဲ့နဲ့ပင် မှန်တင်ခုံရှေ့ ထိုင်ကာ ဆံပင်များ ခြောက်အောင် ဒွိုင်ယာ မှုတ်ရင်း ခဏ အကြာ ကုတင်ပေါ် ပက်လက် လှဲချ လိုက်တော့သည်။ ” မင်း … ရေခြောက်ရင် … ငါ့ ဇတ်ကြောတွေ ဆွဲပေးပါ့လား … ရေငတ်ပြီး … အကြောတွေ တင်းနေလို့ ” ” ဟုတ် … မမနန်း ” စကားပြောရင်း မှောက်အိပ် လိုက်သော ဒေါ်နန်းသဇင် ဘေးနား တင်ပလွဲ ဝင်ထိုင်ကာ ဇတ်ကြောများ စနှပ်ပေး လိုက်၏။ ဂုတ်သားလေးမှာ ဖွေးစွတ်နေပြီး မောင်တူး နှိပ်လိုက်တိုင်း လက်ဖိရာ အတိုင်း ရဲတက်လာသည်။ ဂုတ်မှ တဆင့် ပုခုံးသား ၂ဖက်အား နှိပ်ရင်း အောက်ဖက် ရွေ့လာရာ ဖင်သားစိုင် ၂ချက်အား ဆုပ်နယ်ရင်း ပေါင်တန် နောက်ခြမ်းသို့ ဖိနှိက်ပေးပြန်၏။
ရင်လျား ထားသော တဘက်မှာ ပေါင်လယ်ထိသာ ဖုံးသဖြင့် နှိပ်ရင်း မောင်တူး တယောက် တဘက် အောက်နားစ အား မကြည့်ရာ ဖင်ကြားအောက် ရေစိုနေသော စောက်မွှေးလေးများ မြင်နေရသည်။ မောင်တူး ပေါင်ကြားမှ လီးမှာ ခုံးထ လာတော့၏။ ” အင်း … မင်းက … လက်ပေါက်သားပဲ … ငါ ပက်လက်လှန်ဦးမယ် … ခြေသလုံး ကနေ အပေါ်ထိ … နှိပ်ပေးဦး ” မောင်တူး မျက်လုံးများ အရောင်တောက် လာသည်။ခြေဖဝါး အလယ်မှ စနှိပ်ကာ ခြေသလုံး လေးအား နှိပ်ပေး ပြန်သည်။ ဒီတကြိမ် ပက်လက် အနေထားမို့ အတွင်းခံ မပါသော စောက်ပတ်လေးအား ပေါင်လယ် မှ လန်တက် နေသော တဘက် အောက်နားစမှ မပေါ်တပေါ်လေး မြင်နေရ၏။ မောင်တူး စိတ်ထဲ တဒိုင်းဒိုင်း ဖြင့် ရင်ခုန်လာကာ လက်၂ဖက်မှာ ဒူးဆစ်လေး ကျော်ပြီး ပေါင်တန်၂ဖက်ပေါ် ရောက်ရှိ သွားသည်။ တဘက် အောက်နားစလေးထဲ လက် ၂ဖက် သွင်းကာ ပေါင်တန် အား နှိပ်ရင် အပေါ် ရွေ့သွားရာ ပေါင်ရင်း အရောက် ဒေါ်နန်းသဇင် စောက်ပတ် လေးမှာ ရေစိုနေသော စောက်မွှေးလေး များ ကပ်နေကာ နီညိုရောင် အဖုတ်နားရွတ် လေး၂ဖက်က လန်နေပြီး အက်ကွဲကြောင်း ဘေး နူတ်ခမ်းသား မှာ ဖေါင်းကြွ လာတော့၏။ ဒေါ်နန်းသဇင် မျက်နှာအား ခိုးကြည့် မျက်လုံးလေး စင်းနေသဖြင့် မောင်းတူး အတင်းရဲလာသည်။ အဖုတ်နူတ်ခမ်းသား ၂ခုအား ဖြဲကာ အပေါ်ရှိ အရည်ပြား မာတင်းစ ပြုနေသော အစိလေးအား လက်မဖြင့် ဖိချေ လိုက်တော့၏။ ” ဟင် ……… မောင်တူး ……… နှိပ်ပါဆို ……… ဘာလုပ်နေတာလဲ …… အာ ” မောင်တူး မျက်နှာပေါ် ချွေးစေးများ ပျံနေကာ ဒေါ်နန်းသ ဇင် စကားအား ပြန်မပြောပေ။ ကန့်လန့် ဖျက် အနေ ထားဖြင့် အဖုတ်ပေါ် မျက်နှာ အပ်ပစ် သည်။ ရုတ်တရက် မို့ ဒေါ်နန်းသဇင် ပေါင်တန်၂ ဖက်အား စိလိုက်သော်လည်း ဖေါင်းကြွနေသော အဖုတ်အပေါ်ပိုင်းရှိ အစိလေးမှာ မောင်တူး ပါးစပ်ထဲ ရောက်ရှိ နေတော့၏။ ” အိုရ် ………… ခက်တော့တာပဲ ………… မောင်တူး ရယ် ……… ကျွတ်ကျွတ် ” ဒေါ်နန်းသဇင် ဟန်လုပ်နေသော်လည်း စောက်ပတ် လေးမှာ အရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက် နေသည်။ မောင်တူး မှာ အစိလေး စုပ်ရင်း အဖုတ် အက်ကွဲ ကြောင်းထဲ လျှာထိုး သွင်းကာ အထက်အောက် ကန့်လန့် ဖျက် ဖိဆွဲ ပေးရာ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား မသိမသာလေး ဖြဲပေး နေတော့၏။ ” အ …… အ ……….ရှီးးးးး …….ဘယ်လို …. လုပ်နေတာလဲ … မောင်တူး ရယ် ………… ဟင့် ဟင့် ” ဒေါ်နန်းသဇင် ဟန်မဆောင်တော့ပေ ရင်လျား ထား သော တဘက်အား ဖြည်ရင်း ဖင်ကြီး ကြွတက် လာပြီး ကော့ပေး ထားသည်။
ခေါင်းထောင် နေသော အစိ လေးအား မောင်တူး ပါးစပ်ဖြင့် လိုက်ကပ် ပေးရင်း တရှီးရှီး ညည်းနေ ၏။ ” ပေါင်ကြားထဲ … လာပါ့လား … မောင်တူး ” ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ မောင်တူး ပါးစပ်အား စောက်စိလေး တေ့ပေးရာ ကန့်လန့်ဖျက်မို့ အားမလို အားမရဖြစ်ကာ သူမ ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ယက်ရန် ပြောလိုက်ပြန်သည်။ မောင်းတူး တယောက်ထရပ်ကာ ဒေါ်နန်းသဇင် ပေါင်ကြား ထဲ ဒူးထောက် နေရာယူပြီး ခါးညွတ်ရင်း စောက်ပတ်အား ထိထိမိမိလေး ဖိယက်ပေးတော့၏။ ” အ ……. အ ……အစိလေး စုပ်ပြီး …နာနာလေးယက်… အင်း …… ဟုတ်တယ် …… ဟုတ်တယ် …. ကောင်းလိုက်တာ ………အဟင့် ဟင့် ……အား ……..အား ……… ထွက်ပြီ …… အ …… အားးးးးးးးးး ” မောင်တူး မျက်နှာအား အဖုတ်ဖြင့် ဆွဲကပ်ကာ ပန်းထုတ် သဖြင့် မောင်တူး မျက်နှာ တပြင်လုံး စောက်ရည်များ ရွှဲနှစ်နေသည်။ ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ မောင်တူး လျှာစွမ်း အောက် တချီ ပြီးသွားသဖြင့် မျက်လုံးလေး စင်းကာ အနားယူနေတော့၏။္ထ္ထ္ထ္ထ္ထ္ထ္ထ္ထ္ထ” မောင်တူး ” ” ဗျာ ” ” မင်း … ဟာကြီး … တအား ထောင်နေပါ့လား ” ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ ပင်ကိုယ်စိတ် ရာဂအားကြီး သဖြင့် ထောင်မတ် တင်းမာနေသော လီးအား မြင်သည်နှင့် ပက်လက်လှန် အနားယူနေရာမှ ထထိုင်ရင်း ဘယ်လက် ဖြင့် ပုဆိုးပေါ်မှ အုပ်ကိုင် လိုက်တော့ သည်။ ၅ချက်ခန့် ပုဆိုး အပြင်မှ ဂွင်းထုပေးရင်း ညာလက်မှ ပုဆိုး အောက် နားစအား ဗိုက်ပေါ်ထိ ဆွဲတင်ပစ်၏။ ပုဆိုးအောက်မှ ရမ်းခါ ထွက်လာသော လီးကြီးအား ကြည့်ကာ လျှာသပ်ချ နေတော့သည်။ မောင်းတူမှာ ပိန်ပိန် ရှည်ရှည် လက်ပြင် ကိုင်းပေမယ့် ပေါင်ကြားမှ လီးမှာ ဂေါ်လီ ၃လုံးဖြင့် စံချိန်မှီ လှ၏။ ဒေါ်နန်း သဇင် ဘယ်လက်လေး မောင်တူး လီးပေါ် ပြန်ရောက် လာကာ လီးအရည်ပြားအား ဖြဲချလိုက် သည်။ အညိုရောင် သန်းကာ အကြောများ ထောင်ထ နေသော မောင်တူး လီးမှာ ဒစ်ကြီး ကားထွက်လာပြီး လီးထိပ်နား အပေါ်ဘက်တွင် ဂေါ်လီ တလုံးနှင့် တလက်မ ခန့် အကွာ ဘေး တဖက်တချက် ဆီတွင် ၂လုံးက လီးအရည်ပြား ပေါ် တင်းကနဲ့ ပေါ်ထွက်လာ ၏။ ထိုချိန် ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ ဒူးတုတ် ထိုင်လျက် အနေ ထား ဖြင့် ခါး ညွတ်ကာ လီးအရင်း အောက်ဖက် တွဲကျနေသော လဥ ၂လုံးအား ပါးစပ်ထဲ ဆွဲစုပ်ရာ အကြောပြိုင်းပြိုင်း ထနေ သော မောင်တူး လီးကြီးမှာ ဆက်ကနဲ့ ဆက်ကနဲ့ တုန် ကာ ခါရမ်း နေသည်။ လဥ၂လုံးအား ပါးစပ်ထဲမှ ပြန်ထုတ် ကာ မောင်တူး ပေါင်ကြား ထဲ နေရာယူပြီး ပေါင်၂ဖက် ဆွဲမြှောက် ကွေးကာ ဖိတွန်းရင်း ဖင်ဝလေးအာ လျှာထိပ် ဖြင့် ထိုးကလိ ပေးလိုက်၏။
” အား လားလား ……… မမနန်းရယ် ……. ကောင်း လိုက် တာ ဗျာ …….ရှီးးးးးးးးးးးးး ” လျှာထိပ်လေးနှင့် ဖင်ဝလေးအား ထိုးသွင်း မွှေခံရ သဖြင့် မောင်တူး တယောက် ကွေးမြှောက်ထားသော ပေါင်၂ဖက် ဆက်ကနဲ့ ဆက်ကနဲ့ တုန်ကာ တရှီး ရှီးဖြင့် စုပ်သပ် နေရ သည်။ ကျေးဇူးရှင် ဆရာ ကတော် ဒေါ်နန်းသဇင် ဆီမှ ဒီလို အပြုစု အယုယ များ ရဖို့ အိပ်မက်ပင် မမက်ဖူးပေ။ ” အ ………အားဟား ……..ဟူးးးးးးးးး …..အ ” ဒေါ်နန်းသဇင် တယောက် ဖင်ဝလေး ထိုးထိုး ယက် ကာ လက်ကလည်း လီးအား တစ်ချက်ချင်း ထုပေး နေသဖြင့် မောင်တူး မခံနိုင် ရှာတော့ပေ။ ” မမနန်း …… ရှီးးးးးး …….. အအ ……. ကျနော် ……..လိုး လိုး ……လိုး ချင် ပြီ ဗျာ ” ခဏအကြာ ပက်လက်လှန်ကာ ဒူးထောင် ပေါင်ကား ထားသော ဒေါ်နန်းသဇင်၏ အဖုတ်ထဲ မောင်တူး တယောက် ဒူးထောင်လျက် အနေထားဖြင့် လီးထိပ် အား တေ့ကာ ဖိလိုး လိုက်တော့သည်။ ” အိုးးးး …… ကျွတ်ကျွတ် …. အ ” မောင်တူး လီးကြီး ဒေါ်နန်းသဇင် စောက်ပတ်ထဲ တရစ် ချင်း ဝင်လာနေ၏။ စောက်ပတ်လေးထဲ တင်းကျပ် နေသဖြင့် အစပိုင်း အနည်းငယ် နာကျင် ကာ အော်နေမိ သည်။ ” အား ……အင့် … ဖြေးဖြေး …. နာတယ် …..အား …..အ …..အမေ့ ……နာလိုက်တာ …. အမေ့ …. အားး …. အားးး ” ဒေါ်နန်းသဇင် တယောက် သူမတို့ လင်မယား အိပ်သော ကုတင်ပေါ်တွင် မောင်းတူး ရင်ဘတ်အား ဆီးတွန်းကာ လီးထိပ်မှ ဂေါ်လီ ဒဏ်အား လူးလိမ့်နေ အောင် ခံစား နေရ သည်။ ” အားးးး …… မင်း လီးက …..ဘယ်လို ကြီးလဲ ….အား… အင့်..စောက်ဖုတ်လေး …. ကွဲပါပြီ …..အားး …… ယားလည်းယားတယ် ……နာလည်း နာလှပါပြီ ……အမလေးးး …. အဟင့် ဟင့် ” မောင်းတူး လီးထိပ်မှ ဂေါ်လီများက ဒေါ်နန်းသဇင် စောက်ခေါင်းပေါက် အတွင်းသားများအား ပွတ်တိုက် ချိတ်ဆွဲ နေ၏။ ကုတင်ပေါ်တွင် ဒေါ်နန်းသဇင် မျက်နှာ လေး ရှုံ့မဲ့ကာ လူးလွန်နေပြီး မောင်တူး လက်မောင်း အိုးအား ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင် ထား လိုက်သည်။ မောင်တူးမှာလည်း နဖူးကြောလေး တွန့်ကာ မချိမဆန့် လေး ဖြစ်နေသော ဒေါ်နန်းသဇင် မျက်နှာအား ကြည့်ပြီး လီအရင်းထိ ဆောင့်လိုး ပစ်၏။
အမလေးးး ….. သေပြီ သေပြီ ….. အ ….. အားးးး ….. ကောင်းလား …… မမနန်း သေမတတ်ပါပဲ …… မောင်တူးရာ …… မင်း လီး အပေါ်က …… အဖုလေးတွေက ……… နာလည်းနာ ……… ကောင်းလည်းကောင်း ……. အ ….. အင့် ” ” အဲတာ …… လိုးတဲ့ချိန် ……… ခံစားမှု့ ပိုကောင်း အောင် …. ထည့်ထားတာ …. မမနန်း …… ကြိုက်တယ် မလား ” ” ရှီးးးးး …….. မင်းလီးက …… ရှည်တော့ …… သားအိမ် …… လာလာထောက်တယ် …. အဖုလေးတွေက …… အတွင်းထဲ ………… ကြိတ်မွှေနေတော့ …… ကောင်းတာပေါ့ …. စလိုးကတည်းက ……… ခဏ နေတော့ ……… မမနန်း …… တချီပြီး သွားတယ် ” မောင်တူး လီးမှာ ကြီးမား တုတ်ခိုင်ကာ ဂေါ်လီပါ သဖြင့် ဒေါ်နန်းသဇင် တယောက် လီးအရသာအား အပြည့် အဝ ခံစားနေရ၏။ လင်ဖြစ်သူ ဦးစိုင်းမောင် လီးအား ဂေါ်လီများ ထည့်ရန် ပူဆာဖို့ တေးထားလိုက် သည်။ မောင်တူး လီးကြီးဖြင့် မီးပွင့်မတတ် အလိုးခံ ရင်း ရေမဆေး တော့ပဲ လီးအား အကြိမ်ကြိမ် စုပ်ပေး နေမိ၏။ နောက်ဆုံး ပါးစပ် အား အလိုးခံရင်း မောင်တူး စိတ်တိုင်းကျ လရည်များ မျိုချပေးရပြန် သည်။ အချိရည်သောက် အမောဖြည်ပြီး ခဏအကြာ မောင်တူးမှာ ဒေါ်နန်းသဇင် ဖင်ကြီးအား ပင့်မကာ ခြေရင်းဘက်ရှိ ခွခေါင်အုံးဖက်လုံးအား ဖင်အောက် ခုပေးလိုက်၏။ ဖေါင်းကားနေသော စောက်ပတ်လေး အား လီးထိပ်ဖြင့် တေ့ကာ ဖိလိုး ပေးပြန်သည်။အား ……… ကောင်းလိုက်တာ…… မမနန်း …… စောက်ဖုတ်က …… စီးပိုင်နေတာ ….. အိမ်ထောင်သည်ဆို ….. ယုံမယ် မထင်ဘူး ” မောင်တူးမှာ စကားပြောရင်း ဖင်အောက် ဖက်ခေါင်း အုံး ခုထားသဖြင့် ဖေါင်းကြွလာသော ဒေါ်နန်းသဇင် စောက် ဖုတ်လေးအား လီးအရင်းထိ တဘွတ်ဘွတ် ဖြင့် ဆောင့် လိုး ပစ်၏။ ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ မောင်တူး လိုးချက် များ အောက် အဖုတ်တခုလုံး အရည်တွေ ရွဲနှစ် နေတော့ ၏။ ဒေါ်နန်းသဇင်မှာ လင်ဖြစ်သူ ဦးစိုင်းမောင်၏ လီးဖြင့် သာ အလိုးခံဖူးရာ မောင်းတူး ၏ ဂေါ်လီပါသော လီးကြီး အား ခံ၍ မဝနိုင်အောင် ဖြစ်နေမိသည်။
” အား ……. ကောင်းလိုက်တာ ……. မောင်တူးရယ် ……… အမေ့ ……. အင့်…… အား …….. ဆောင့် ဆောင့် ……… မင်း စိတ်တိုင်းကျ …….ဆောင့်လိုးစမ်းကွာ ……….. အားးးးးး ….. အားးးးးးးး ” ” ကောင်းလား ……… မမနန်း …. နောက်လည်း ……. လိုးခွင့် ပေးဦး မှာလား အား … ရှီးးးးးးးး ……ကောင်းတယ် ……. မင်း ဆရာ … မရှိတဲ့ချိန်… အချိန်မရွေး …လာလိုးလေ …. ဒါပေမယ့် …ငါ့ကိုပဲ လိုးရမှာနော် ….. အပြင် တခြားကောင်မလေးတွေ ……… မလိုးရဘူး ” ” အင်းပါ ……… မမနန်းရဲ့ … ဒီလောက်လှတဲ့ ….. မိန်းမ တယောက်ကို … လိုးနေရတာ …..ဘယ်မိန်းမကို …… သွားလိုးရ ဦးမှာလဲ …. ဆရာ မရှိချိန် ..လာလာ လိုးမှာ ” ” အင်း … အင့် ….. လာလိုးပေါ့ ……. အား …..အင့်…ကောင်းလိုက်တာဟာ ……. မင်း လီးကြီးက ….အဖုလေးတွေ ကလည်း … အတွင်းထဲ ……. တကယ် အရသာ ရှိတယ် …. ဆောင့် ဆောင့်….. ပြီးတော့မယ် ….. နာနာလေး ……. ဆောင့်ပေးဦး ” မောင်တူးလည်း စကားအဆုံး မီးပွင့်မတတ် ဆောင့်လိုး ပေးရာ ဒေါ်နန်းသဇင် တယောက် တအားအား ညည်းရင်း တကိုယ်လုံး တုန်ရီလာပြီး မောင်တူး ကျောပြင်အား ခပ် တင်းတင်း ဖက်ကာ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်တော့ ၏။ ” အမလေးးးး အား အား ……. ထွက်ပြန်ပြီ ……. ရှီးးးးးးးးးးး …..အမေ့ …….. အားးးးးးး …. ကောင်းလိုက်တာ …..ဟာ …… ငါတော့ ….. မင်းလီး ကြီးကို …. ကြိုသွားပြီဟာ …… မရပ်နဲဦး …… မင်းပြီးအောင် ……ဆက်သာလိုး ” မောင်တူးလည်း အံကြိတ် လိုးရာ အချက် ၆၀ ခန့်တွင် ဒေါ်နန်းသဇင် စောက်ခေါင်း အတွင်းသားများ၏ ညှစ်ပေး သည်ဒဏ်အား မခံနိုင်ပဲ လရည်များ တဖျောဖျော ပန်း ထုတ် လိုက်ရတော့သည်…..ပြီး။